CM Shredders - Fanodinana fitaovana fanodinana
Ny Indostrian'ny Indostria amboara miteraka vokatra mahomby indrindra. Ny endriky ny patin'ny pataloha dia miasa amin'ny fandeferana faran'izay akaiky izay mamokatra ny fako indrindra amin'ny indostria. Ny masombarotra dia azo averina sy ampiasaina indray izay hampitombo ny fiainan'ny maty ary hampihenana ny fandaniana.
Ny Teknika Farany amin'ny Teknika.
Mamela ny fisarahana ny kodiarana amin'ny kodiarana amin'ny vatosoa amin'ny fomba madio sy madio indrindra, mamela ireo processeurs mba hamoronana rongony avy amin'ny fingotra sy ny jiro. Ny famolavolana ny "rafitra mandalo" dia mampihena ny teboka madinika mba hamokarana rafitra mahaleotena mahaleotena indrindra amin'ny indostria.
Ny CM Granulator & System Removal Removal dia afaka manaiky 6-19 mm minus maimaimpoana maimaim-poana ary manodina azy amin'ny 1-4 mm gripa grate (10-20 mesh).
Ny fampirimana dia ampiasaina mba hampitombo ny fitaovana ary ny rafi-pandehanana dia ampiasaina mba handraisana ny fibre fibres nila.
Ny rafitra maitso matevina tsara.
Ity rafitra fantsom-pitoto vaovao vaovao ity dia mpitarika fantatra amin'ny fandrosoan'ny teknolojia sy ny fahaiza-manao. Ny milina dia afaka manamboatra rubber ho an'ny vovoka matevina manomboka amin'ny 10- 80 mesh.
Mitady rafitra fanodinana volon-koditra feno?
MITADY NY RARINY AMIN'NY MARKETSY - MIFANTOKA AMIN'ANDRIAMANITRA
AO AMINAREO ITY?
CM dia mirehareha amin'ny fampidirana andalana vaovao amin'ny fikorotan-tsaina ankapobeny amin'ny alàlan'ny rafitra vaovao fitaovana hanatsarana sy hanitarana ny tombo-kase roa tonta.
• Toerana iray na manolo ny fampidirana antsy ho an'ny fampiharana marobe
• Nihatsara kokoa ny fitaovana an-jatony ary naharitra kokoa
• Misefosefo / azo ampiasaina amin'ny fampiasana misimisy
• Mampihena ny vidin'ny antsy sy ny fotoana lava
FANAMPIM-PANAZAVANA MOMBA NY VELONA VAOVAO
Te-hahita azy ireo ve ianao?
Famaranana sy fanala
Ny CM Tire Shredders & CM Industrial Shredder Equipment dia mirehareha amin'ny USA ao amin'ny orinasa Sarasota, Florida
CM Tire Shredders / CM Endrika
Marika iray an'ny Bengal Machine
Teknolojia Fueling, Innovation ho an'ny androany sy ankoatra. Ny CM Shredders dia efa ela no nitarika ny fanavaozana ny lalao. Ny CM Shredder rafitra fanodikodinam-pako dia sarotra amin'ny asa any amin'ny toerana an-jatony manerana ny kontinanta 5 any amin'ny firenena mihoatra ny 28, ary manamboatra kilaometatra lavitrisa tapitrisa maneran-tany. Ny CM Shredders dia mampiasa ny teknolojia maoderina, izay mahafeno ny tontolo maneritery sy manasazy ny varotra ary nanjary ho azo antoka indrindra, azo itokisana ary mandroso amin'ny indostrian'ny rafitra mpanodina.
Tamin'ny volana desambra 28, ny 2018 CM Shredder dia nividy ary nanatevin-daharana ny fianakavian'i Bengal Machine ho an'ny orinasam-panarenana, izay ahitana ny orinasa rahavaviny, Schutte Hammermill, mpanamboatra mpamorona iray any New York izay namolavola fitaovana famenoana maotera, basy, mpanodina ary mpitrandraka izay manome vongam-pandaminana vita tsy tapaka sy marina.
Inona ny fampiharana anao? *
2019 © Copyright Industrial Shredders LLC. Zo rehetra voatokana.
Inona no fampiharana anao?
2019 © Copyright CM Shredders. Zo rehetra voatokana.